Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အများအပြား ပါဝင်
အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အများအပြား ပါဝင်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၃၃ မိနစ်	တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုမဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ။ ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ကြာသပတေးနေ့ ကြေညာချက်အရ သောကြာနေ့တွင် အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦး လွှတ်ပေးလိုက်ရာ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများစွာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။မဇ္ဈိမက ရရှိထားသည့် လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကနဦး စာရင်းကို တင်ပြပေးလိုက်သည်။ရွှေဝါရောင် ဆန္ဒပြမှု ဦးဆောင်ကိုယ်တော် အရှင်ဂမ္ဘီရ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ပဏ္ဍိတ်ထွန်း၊ မမီးမီး၊ မနီလာသိန်း၊ ကိုအံ့ဘွယ်ကျော်၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုပြုံးချို စသည်တို့အပြင် စာနယ်ဇင်းသမား များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုဇော်သက်ထွေး၊ နေဘုန်းလတ်တို့ အပါအဝင် စုံစမ်းရရှိထားသည့် အခြေအနေအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ် NLD ဦးတင်ယု လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၈ နာရီ ၁၄ မိနစ်
မိတ္တီလာထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃ ဦးနှင့် ဦးခင်ညွန့်၏ တပည့် ၃ ဦး စုစုပေါင်း (၆) ဦး လွတ်သည်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃ ဦးအနက် ၂ဝဝ၇ ခု ရွှေဝါရောင် ဆန္ဒပြမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ အင်းစိန်မြို့နယ်NLD လူငယ် ကိုထွန်းထွန်းနိုင်နှင့် ကိုထွန်းထွန်းဦးတို့ ပါဝင်ပြီး ယနေ့ည ကားဖြင့် ရန်ကုန်ပြန်ကြမည်။ အောင်လံမှ ကိုမြတ်ကို မှာ အောင်လံသို့ ပြန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၈ နာရီ ၀၄ မိနစ်
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၇ နာရီ ၅၉ မိနစ်
မန္တလေးတိုင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် ဒေါ်ဝင်းမြမြသည် မြန်မာ့လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီချိန်တွင် ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုအကျဉ်းထောင်မှ နေရပ် မန္တလေးသို့ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်ကျခံရာမှ အယူခံ တက်ခဲ့ရာ ၈ နှစ်သို့ လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ ထိုမှ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ၁ နှစ်လျော့ပေးခဲ့ပြီး ၁၃.၁.၂ဝ၁၂ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့ သည်။ပူတာအိုအကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသားပေါင်း ၆၁ ဦး လွတ်မြောက်လာရာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃ဝ ကျော် ပါဝင်ပြီး ကျန်သူများသည် စစ်ထောက်လှန်းရေး၊ အကောက်ခွန်အရာရှိများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိများဖြစ်ကြသည်ဟု ဒေါ်ဝင်းမြမြင်၏ ညီမဖြစ်သူ ဒေါ်တင်ဝင်းရီက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အောင်လံမြို့သို့ရောက်ရှိသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၆ နာရီ ၂၆ မိနစ်
သရက်ထောင်မှ သောကြာနေ့နံနက်က လွတ်မြောက်လာသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အောင်လံမြို့တွင် ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ မကွေးထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူများအားစောင့်ရမယ်လို့ အစ်မဖြစ်သူ မသန္တာညွန့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်လည်း အင်းစိန်ထောင်မှ ချိုင်းထောက်ဖြင့် သောကြာနေ့က လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပြီး နေအိမ်သို့မူ ပြန်မရောက်သေးကြောင်း နှမဖြစ်သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ NLD လူငယ်များ ပါဝင် သည့် သွေးလှူအဖွဲ့ကို ကူညီခဲ့သူ ကိုနေမျိုးဇင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဖမ်းဆီးခံ ခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် အပစ်ပေးခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သည့် ကိုမင်းဇေယျာလည်း လားရှိုးထောင်မှသောကြာနေ့က လွတ်မြောက်လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကိုမင်းဇေယျာနှင့် ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရခဲ့သူ ဇနီး မချိုချိုဝင်းက မဇ္ဖျိမကို ပြောသည်။ စနေနံနက်စောပိုင်းတွင် ရန်ကုန်သို့ ကားဖြင့် ရောက်လာမည်ဟု ဆိုသည်။
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့တွင် လာရောက်စောင့်မျှော်နေသည့်မြင်ကွင်းသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၅ နာရီ ၁၂ မိနစ်
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့် သားဖြစ်သူနှင့် အတူ တွေ့မြင်ရစဉ်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၃ နာရီ ၃၃ မိနစ်
စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၈ ဦး လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၂ နာရီ ၃၈ မိနစ်
ရွှေဘိုထောင်မှ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မမီးမီးနှင့် ကိုသက်ဇော် လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၂ နာရီ ၃၇ မိနစ်
အလားတူ ၈၈ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် မမီးမီးနှင့် ကိုသက်ဇော်တို့မှာ ရွှေဘိုထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ယနေ့ညနေ ကားဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လာကြမည်ဟု မမီးမီးနှင့် ဖုန်းအဆက်သွယ်ရသူ သူ၏ ခင်ပွန်း ကိုလှမိုးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကသာထောင်မှ ၅ ဦး လွတ်မြောက်သည့်အထဲတွင် မလှလှဝင်းနှင့် ကိုအံဘွယ်ကျော်တို့ လည်းပါသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
လွိုင်ကော်ထာင်မှ HRDP ဦးမြင့်အေး မလွတ်မြောက်သေးသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၂ နာရီ ၃၆ မိနစ်
မြောင်းမြထောင်မှ အရှင်ဂမ္ဘီရ လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၂ နာရီ ၃၃ မိနစ်
၂၀၀၇ ခု ရွှေဝါရောင် သံဃာ့ခေါင်းဆောင် ကိုယ်တော်တပါးဖြစ်သူ အရှင်ဂမ္ဘီရသည် မြောင်းမြထောင်မှသောကြာနေ့က လွတ်မြောက်လာပြီး ဖြစ်သည်။ ဦးဇင်းနှင့် ယနေ့မနက်က စကားပြောခဲ့ရသည့် မယ်တော်ဖြစ်သူဒေါ်ရေး က ဦးဇင်းနှင့် တွေ့ဆုံရန် ညနေတွင် ရန်ကုန်သို့ ဆင်းမည်ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ မြောင်းမြမြို့ခံက ဦးဇင်းကို သိမ်ထပ်ပေးခဲ့သဖြင့် သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ကြွရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။ မြောင်းမြထောင်မှ စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး လွတ်မြောက်သော်လည်း အရှင်ဂမ္ဘီရ တပါးတည်းကို ရန်ကုန်သို့ သီးသန့် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်သို့ ညနေပိုင်းတွင် ရောက်ရှိမည်။
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့တွင် ကြိုဆိုနေသူများသတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၁ နာရီ ၅၁ မိနစ်
ရှင်ဆန္ဒာဓိက အင်းစိန်ထောင်မှ လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၁ နာရီ ၄၄ မိနစ်
တောင်ကြီးထောင်မှ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများလည်း လွတ်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၁ နာရီ ၁၁ မိနစ်
တောင်ကြီးထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၃ ဦး လွတ်မြောက်လာရာ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုဂျင်မီ၊ ကိုမြအေး၊ ကိုကျော်ကိုကို၊ ကိုရာဟု တို့အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ HRDP အဖွဲ့မှ ဦးမောင်ကန်တို့လည်း လွတ်မြောက်လာသည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ် NLD ၏ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီမှုအဖွဲ့မှဒေါ်ခင်မိုးမိုးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ယင်းအပြင် လွတ်လာသူ ၃၃ ဦးထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှ ၃ ဦး ပါဝင်ပြီး အရှင်ဂမ္ဘီရ ၏ အစ်ကို ကိုအောင်ကျော်ကျော်လည်း လွတ်မြောက်လာသည်ဟု သိရသည်။လွတ်မြောက်လာသူများအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် NLD မှ ကူညီနေသည်ဟု ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ပြောသည်။“ သူတို့နေဖို့ ထိုင်ဖို့ အိမ်က လာမကြိုနိုင်တဲ့လူတွေအတွက် ကျမတို့ ရှမ်းပြည်နယ် NLD က စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကော့သောင်းထောင်မှ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချို လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုသည် ကော့သောင်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး သောကြာနေ့ မနက် ၁၁ နာရီတွင် ကော့သောင်းလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းမောင်က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကော့သောင်းမှ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ ဆိုက်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ သူနှင့်အတူ မည်သူများ လွတ်မြောက်သည်ကိုမူ မသိရသေးပါ။
ဘူးသီးတောင်ထောင်မှလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်
ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုစည်သူမောင်၊ ကိုအောင်ဇော်ဦး အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀ ဦးလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကာ စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ဟု ကိုဌေးကြွယ်၏ ညီမဖြစ်သူ မမိမိကြွယ်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကိုဌေးကြွယ်မှာ သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ယင်းအပြင် ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ စုစုပေါင်း ၃၁ ဦး လွတ်မြောက်လာရာ ကျန် ၂၁ ဦး၌ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကောက်အခွန် အရာရှိများ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်မောင်သန်းမှာမူ လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိဟု သိရသည်။
ဦးခွန်ထွန်းဦး မှာ တောင်ငူထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၃၂ မိနစ်
ဦးခွန်ထွန်းဦး မှာ တောင်ငူထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပြီး ယခု တောင်ငူမှ ရှမ်းပြည်နယ်သို့ အပြန် လမ်းပေါ်တနေရာတွင် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ယင်းအပြင် ဘလော့ဂါဟု လူသိများသည့် နေဘုန်းလတ်မှာ ဘားအံထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီဟု ဖခင်ဖြစ်သူ က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသူတဦးဖြစ်သူ မနီလာသိန်းမှာ သာယာဝတီထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီဟု လည်း ယောင်းမဖြစ်သူ မသန္တာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ကိုဇော်သက်ထွေးမှာလည်း တောင်ကြီးထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာပြီဟု စုံစမ်းသိရသည်။၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးမှာ မိုင်းဆတ်ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး အစိုးရမှ စီစဉ်ပေး သည့် လေယာဉ်ဖြင့် နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရန်ကုန်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်ဟု ညီဖြစ်သူ ကိုအောင်ထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ယင်းလေယာဉ်သည် ကျိုင်းတုံထောင်မှ လွတ်မြောက်လာမည့် အကျဉ်းသားများကိုလည်း ဝင်ခေါ်မည်ဟု ကိုအောင်ထွန်းက ဆက်ပြောသည်။လားရှိုးထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဖြစ်သည့် ဗကသ ကျောင်းသူ မဟန်နီဦး၊ ငွေစိုးလင်း၊ မဂ္ဂင်ဆရာတော်၊ မြင်းခြံဆရာတော် ဦးနန္ဒဝံသ၊ ကိုမင်းဟန်၊ ကိုမြင့်နိုင်၊ ဇာနည်အောင်၊ ဉာဏ်လင်းထွဋ်၊ ကိုမင်းဇေယျာ တို့ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာကြကြောင်း မဂ္ဂင်ဆရာတော်က မဇ္ဈိမကို အမိန့်ရှိသည်။
ဦးခင်ညွန့် လွတ်မြောက်သတင်းလွှင့်တင်ချိန်- မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂ နာရီ ၃၁ မိနစ်
ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ယနေ့လွတ်မြောက် လာစဉ် (ဓါတ်ပုံ။ မဇ္ဈိမ)။ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် သတင်းထောက်များကိုပြောကြားရာတွင် သူ့အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံကြောင်းပြောသည်။
လားရှိုးမြို့တွင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွား၊ ညမထွက်ရအမိန့် ချက်ခြင်းထုတ်ပြန်	၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ရေး ရှမ်းနှင့် ကယား ညီလာခံ ဆွေးနွေး	နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လုံးဝ မရှိတော့သည့် ရလဒ်သာဖြစ်သင့်	ရှမ်းနှင့် ကယားအဖွဲ့အစည်းများ ညီလာခံ မကြာမီ ကျင်းပမည်	အကျဉ်းသား ၄၅၂ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြု	ရှမ်းညီလာခံတွင် ဒု-သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကို ဖိတ်ကြားမည်	၈၈ ကျောင်းသားများ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံမည်	Who is Online
We have 174 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved